OEM UK Organic Papo Peac ...
Yakajairwa organic Dried Fres ...
Mutengesi wepamusoro Saudi Arabia te ...
High Quality Enamel Whistli ...
Yakabikwa green green tii
Nguva yekubikira tii: maminetsi matatu
Maitiro matsva ekupisa tii yakasvibirira anochengeta yakawanda chlorophyll, protein, amino acid, zvinonhuhwirira zvinhu uye zvimwe zvirimo, zvichigadzira hunhu hwehunhu hwe "matatu girini uye imwe inotonhorera", ndiko kuti, ruvara rwegirinhi, yakajeka girini sopu ruvara, girini girini pasi; Iyo sosi yeti inonaka uye nyoro, nehwewa hwegungwa hwe mung bhinzi kana chestnut.
Orchid the they
1.Ihwo hwema hwekunhuhwidza osmanthus tii hunogona kubvisa kusagadzikana manzwiro. Kunwa tema osmanthus kunogona kudzikamisa tsinga uye kuvandudza huropi. 2.Bvisa mweya wakaipa mweya Osmanthus tii ine hwema hunofadza, uye tii polyphenols iri mune tii inogona kuputsa mafuta, kubvisa kunhuhwirira mumuromo, kazhinji kunwa osmanthus tii inogona kuenda kune yakaipa mweya, rega vanhu vazere nekunhuhwirira. 3. Mira kukosora uye kudzikisa phlegm Inotapira-inonhuhwirira osmanthus tii ine zvinhu zvinonhuwirira, inogona kudzora sputum, kusimudzira disc ...
Matcha, inozivikanwawo seye yekupedzisira tii, yakatanga muThe Sui neTang Dynasties yeChina. Iyo nzira ndeyekuunganidza madiki tii mashizha mukati megore, oipisa, uye oagadzire mukeke tii (kureva tii boka) yekuchengetedza. Kana yave nguva yekudya, iyo keke tii inobikwa uye kuomeswa pamoto. Mushure meizvozvo, inozorwa kuita hupfu nechero chigayo chematombo. Ipapo inodururwa mumudziyo wetii ndokudurusirwa mumvura irikufashaira, uye iyo tii mundiro inomutswa zvizere netepi yetii kuti igone kuburitsa borting.
Yakakwirira Yemhando YeGardenia tii Chinese Hutano Tea
● 100% Yakachena uye Yakakwira Mhando yeGiredhi Herbs, iro ruva rakakwana, iro ruvara nderwechisikigo, iyo tambo yakasarudzika, uye kunhuhwirira kunofadza.
● Ruoko-rwakasarudzwa zvine hungwaru uye rwakachena chaizvo, runotora hunhu chaihwo, hupfumi hwezvinhu zvinovaka muviri uye hwema.
● Inoshandiswa zvakanyanya mukunhuhwirira kwezvizoro, inokodzera kunyorovesa mvura, porridge, kugezesa kwevana uye zvinonhuwira zvemaruva.
● Nemashizha awo anopenya akasvibira uye maruva machena machena echirimo, anoshandiswa zvakanyanya mumapindu munzvimbo dzinodziya uye munzvimbo dzinodziya, uye sekudyara imba munzvimbo dzakadzikama.
● Mhando dzakawanda dzakakurira kurimwa, nekukura zvishoma, uye mafomu akakura-uye-maruva, ine mabhenefiti mazhinji anogona kutorwa nekuisanganisa mukudya kwako.
OEM UK Organic Instant Peach Oolong Tea Flavors Pearl Mukaka Bubble Tea Raw Zvishandiso Zvekushandisa Chinhu Chemukaka Tea
Peach oolong tii ndiko kusanganiswa kwemaoolong tii mashizha uye echisikigo akaomeswa peach michero. Iwe unogona kuwana chaiyo yakaomeswa peach chunks. Iko kunhuhwirira kweti oolong kunoenda zvakanaka nekuravira kwakanaka uye kunhuwirira kunofadza kwepichisi.
Yakasarudzika organic Yakaomeswa Nyowani Jasmine Bud Ruva Kumusoro Natural jasmine maparera mune tii mabhegi
Yedu Jasmine, inosvika pagiredhi rekudya, inosarudzwa kubva pane akanakisa uye akaomeswa zvakasikwa pasina chero chemakemikari maitiro. Lavender yakaomeswa inogona kushandiswa seye ruva tii inova sarudzo yakanaka kwazvo pakurapwa uye inogona kushandiswa mukubvisa mafuta ejasmsine uye kugadzira sipo.
Mutengesi akanakisa Saudi Arabia tii yekofi kofi keteni musasa enamel ketera
Type: Mvura Kettles
Metal Type: Simbi Iron
Feature: Yakasimba, Yakachengetwa
Tea Mee Tea 41022 Yakanakisisa Kutengesa Classic Bubble Green Tea Chun Mee Tea 41022
Chigadzirwa Chigadzirwa: Green Tea
Zera: 2 - 3 Makore
Chimiro: Yakasununguka Tea
Processing Rudzi: Kurudzira-Yakabikwa
Kavha: Bhegi, Bhokisi, Bulk, Can (Tinned), Chipo Kurongedza, Vacuum Pack
Speciality: Hutano Tea, SLIMMING TI
Ctc Nhema Tiyi Yakakwira-Nyika Ecological Yakanakisa Yemhando Ctc Tea
Chigadzirwa Chigadzirwa: Dema Tiyi, Dema Tiyi
Kugadziridza Rudzi: Kaviri-Yakaviriswa
Speciality: Hutano Tea, Organic Tii
Kavha: Bhegi, Bhodhoro, Bhokisi, Bulk, Inogona (Tinned), Mukombe, Chipo Kurongedza, Mason Jar, Sachet, Vacuum Pack
Chinese Alpine Green Tea JianDe Bao Green Tea Chitubu Tea
Jiande Bucha, inozivikanwawo seYanzhou Bucha, iri orchid-yakaita tete hafu yakagochwa green tii. Yakagadzirwa mumakomo uye gorges yeMeicheng neSandu, Jiande City (yekare inozivikanwa seYanzhou), Hangzhou Guta, Zhejiang Province. Jiande Bao Tea yakagadzirwa muna 1870, uye nzira yayo yekugadzira yakatanga kubva kuSichuan Mengding tea uye Anhui Huangya tii, pakutanga yaive yeHuangtu
Chinese Alpine Green Tea Yongxi Huoqing Green tii
Yongxi Huoqing, hunyanzvi hweJing County, Dunhu reAnhui, chiratidzo chenzvimbo yezvigadzirwa zvemunyika. Yongxi Huoqing ndeyepaarl chai ine yekugadzira nhoroondo yemakore anopfuura mazana mashanu. Iyo yaimbove mutero tii mune ese emadzishe. Iyo inogadzirwa muFengkeng, Pankeng uye Shijingkeng Wantou Mountain, makiromita makumi manomwe kumabvazuva kweguta reJingxian County, Anhui Province. Yongxi Huoqing ane yakasarudzika uye yakanaka chitarisiko, ine zvinyoro uye zvinorema zviyo, rakasvibira girini uye rinopenya, uye rakazara zvakafukidzwa nesirivha.